Bogga ugu weyn 20 Shaqooyinka Labaad ee Macalimiinta Sanadka 2022: Hustle Side for Macalimiinta
Xamaasadaha dhinaca ama waxa aan ugu yeerno shaqooyinka labaad ee macallimiinta ayaan ka saarin shaqada ugu weyn, waxay kaliya u adeegtaa ilo kale oo farxad dhaqaale ah.
Waqtiyadan hubanti la'aanta iyo xidhitaanka dugsiga, macallimiintu waxay mudan yihiin inay helaan il kale oo dakhli si ay u dhammaystiraan jeegga waxbaridda oo ay awoodaan inay badbaadi wax badan iyo maalgashi fiican.
Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah shaqooyinka labaad ee ugu fiican macallimiinta. Shaqooyinkani waxay u badan yihiin shaqooyin waqti-dhiman ah oo waqti ku siinaya shaqadaada waxbaridda.
Ka fiiri jadwalka waxyaabaha hoos ku qoran si dulmar deg deg ah looga yeesho maqaalkan.
Maxay Macallimiintu Samayn Karaan Si Ay U Sameeyaan Lacag Dheeraad Ah?
Sida laga soo xigtay Krista Degerness, oo macallin ka ah Colorado, “waxaan shaqaynaa shaqooyin labaad sababtoo ah mushaharkayaga oo keliya kuma filna bixinta biilashayada, iskaba daa in aan wax kaydsanno mustaqbalka. Krista Degerness, oo macallin ka ah Colorado, waxay shaqaysay 40 ilaa 70 saacadood toddobaad kasta xagaaga 2017 iyo 15 illaa 25 saacadood toddobaadkii shaqadeeda labaad inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Xigasho: NEA Maanta 2018.
Kahor intaanan ku tusin shaqooyinka labaad ee ugu sarreeya macallimiintu waxay sameyn karaan si ay lacag dheeri ah u helaan, waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay in la dhimo xaqiiqda ah in dayax -gacmeedku uusan kaa saarin shaqada caadiga ah. Waxay ku daraysaa adiga jeeg mushahar waxayna kordhisaa heerka shaqadaada.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad maskaxdaada saarto oo aad jadwalkaaga u dhigto mid ku habboon shaqo kasta.
Hoos ka eeg shaqooyinka labaad ee ugu sarreeya macallimiinta…
#20 Noqo xiriiriyaha Amazon
Macallimiintu waxay ka faa'iideysan karaan Amazon barnaamijka affiliate taas oo u saamaxaysa inay la wadaagaan badeecadooda iyo barnaamijyada laga heli karo Amazon dhagaystayaashaada iyada oo loo marayo aaladaha isku -xidhka ee la habeeyay oo lacag lagu kasbado iibsashada iyo ficillada macmiilka sida is -qoritaanka barnaamijka tijaabada ah ee bilaashka ah.
Diiwaangelinta barnaamijka Amazon Associates waa hal tallaabo oo fudud. Si aad u bilowdo, si fudud u booqo affiliate-program.amazon.com oo guji "Ku biir Hadda Bilaash."
Riix halkan si aad ku guuleysto bixinta Amazon ee cajiibka ah.
#19 Lacag lagu siiyo daawashada fiidyowyada
Ku lacag lagu siiyo daawashada fiidyowyada, uma baahnid xirfad ama waayo -aragnimo. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ogaato aaladaha saxda ah oo aad bilowdo daawashada fiidiyowyada.
#18 Hagaha dalxiiska ee deegaanka
Hagayaasha dalxiisku waxay ka shaqeeyaan warshadaha socdaalka, iyagoo siiya safaro hagitaan kooxo booqdayaal ah. Waxay khabiir ku yihiin taariikhda goobta waxayna siiyaan kooxahooda dalxiiska macluumaad xiiso leh ama iftiiminaya oo ku saabsan meelaha xiisaha leh ee soojiidashada dabeecadda, goobaha taariikhiga ah, matxafyada, goobaha muuqaalka leh, iyo meelaha kale ee safarka.
Si aad u noqoto mid ku habboon, waa inaad noqotaa bulsho, deeqsi, iskaashi, dulqaad, daryeel, waxtar leh, naxariis badan, xeelad leh, iyo saaxiibtinimo.
Si aad u bilowdo, raadi shirkadaha dalxiiska ee maxalliga ah ama xarunta soo -booqdaha ee u dhow si aad u hubiso suurtagalnimada. Hagaha dalxiiska, waad samayn kartaa inta u dhaxaysa $ 9 iyo $ 20+ saacaddiiba, oo leh fursad aad ku kasbato talooyin badan.
#17 La -taliyaha waxbarashada
Macallimiinta badankoodu waxay ku habboon yihiin jagooyinka la -talinta waxbarashada taas oo ay ugu wacan tahay waayo -aragnimadooda hodanka ah ee aqoonyahanno ahaan.
La-taliyaha waxbarashadu wuxuu bixiyaa hagitaan kuwa doonaya adeeggooda, oo ay ku jiri karaan qoysas; dugsiyada, iyo kulliyadaha iyo jaamacadaha; iyo ururada waxbarashada.
Macallin ahaan, isku -darka xirfadahaaga iyo saldhigga aqooneed ayaa faa'iido yeelan doona.
Si kor loogu qaado, la -talinta waxbarashadu waa hubaal dhinaca macallimiinta maadaama ay dakhli dheeraad ah u siiso si fudud.
#16 Tababarid ama la talin
Macallimiintu waa la -taliyayaal iyo tababarayaal sida caadiga ah. Dabeecadani waxay ku tusaysaa hawl maalmeedkooda marka ay waajibaadkooda saaran yihiin. Sababtaas awgeed, qaadashada shaqooyinka tababarka iyo hagitaanka ha ahaato lacag la'aan ama abaalmarin ma noqon doonto wax dhib badan.
Waxaad u noqon kartaa tababare ama lataliye macalimiinta cusub, ardayda, ganacsiyada, ururada, kooxaha xooga saara, iyo xirfadlayaasha kale.
#15 Ku hadalka dadweynaha
Macallin ahaan, ku hadalka dadweynaha ma aha wax kaa xanaajinaya. Sidaa darteed, waxaad soo bandhigi kartaa inaad la hadasho koox shaqsiyaad ah, ha noqoto urur shirkadeed ama kooxo cadaadis.
Hadal kasta oo aad jeediso, waxaa jira faa'iido dhaqaale. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso si aad u bilowdo buuqan dhinacani waa inaad abuurto shabakad loogu talagalay fursadaha hadalka saxda ah, qiimee qiimahaaga, oo waad fiicantahay inaad tagto. Tani waa halganka dhinaca mudan ee macallimiinta oo bixiya saacaddiiba.
# 14 umeerin
Khibrad ahaan macallin ahaan, umeerinta ayaa noqon doonta mid aad u wanaagsan oo la qaadan karo.
Tababareyaashu waxay kasbadaan meel kasta $ 25- $ 75 saacaddii iyagoo kaligood shaqeeya. Waxaad ku bixin kartaa adeegyadaada dugsigaaga, ama dugsiyada kale ee degmadaada, ama meel bannaan sida Craigslist.
Haddii kale, waxaad wax ku bari kartaa baraha internetka sida Wyzant or TutorMe. Waxay kaa caawin doonaan inay kula midoobaan ardayda aaggaaga.
#13 Tafatirka Madaxa -bannaan
Inaad noqoto macallin ku xeeldheer sixitaanka waraaqaha iyo shaqooyinka, qaadashada doorka tafatirka madaxa -bannaan ma noqon doonto mid kaa dhiga dhidid.
Shirkado iyo website -yo badan ayaa baahi weyn u qaba in adeegyada tafatirka lagu saleeyo heshiis. Waxaad si toos ah ula xiriiri kartaa loo -shaqeeyayaashan suurtagalka ah, ama khadka tooska ah Dhallinta, Fiverr, ama meel kasta oo suuq ah si adeegyadaada loo helo.
Waxaad ku dallaci kartaa wax ka badan $ 30 saacaddii shaqada tafatirka, taas oo ku kici karta khibrad.
#12 Noqo Turjumaan
Haddii aad si fiican ugu hadasho laba luqadood ama ka badan, qaadashada waajibaadka turjumaanku ma noqon doonto fikrad xun.
Waxaa jira ururo badan oo qaran iyo kuwo caalami ah oo caadiyan dalbada adeegyada turjumaan.
Si aad u orodo, baar oo iska qor qaar ka mid ah bogagga turjumaadda ee iskood u shaqeysta si aad u ogaato haddii shaqooyin ay ku soo maraan.
#11 Daryeelka Carruurta, Daryeelka Carruurta & Daryeelidda
Daryeelka ilmaha, haynta ilmaha, iyo daryeel -bixintu waa hab kale oo macallimiintu lacag ku helaan, gaar ahaan xilliyada fasaxa dugsiga ama xagaaga. Markaa, haddii aad jeceshahay carruurta, oo aad waqti haysato, tani waxay noqon doontaa hustle dhinaca kaamil ah oo la tixgeliyo.
Waxaad ku abuuri kartaa astaan ​​bilaash ah aaladaha waaweyn ee caawiya isku xirka qoysaska daryeelayaasha sida aad jeceshahay Sittercity.com iyo Care.com. Saacadaha shaqadu waa kuwo dabacsan oo heerka celcelis ahaan dalka oo dhan waa kala duwan yahay $ 12-15 saacaddii.
#10 Iibi alaabta gacanta lagu sameeyo
Miyaad jeceshahay inaad abuurto kabo gacmeed, silsilado, dhar tollan, dheriyo, iwm? Hadday haa tahay, waxaad xirfaddaada u adeegsan kartaa inaad ku noolaato.
XIDHIIDHKA: 20 Siyaabood oo Lacag looga Helo Muusigga 2022 | Tusaha Sawirka 7aad
Si aad u bilowdo, waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad sameysato dukaan online ah oo maxalli ah oo aad ku iibiso farsamada gacanta. Waxaad ka faa'iideysan kartaa dukaamada internetka ee cajiibka ah sida Etsy iyo Amazon.
LA XIDHIIDH BADAN: Qaado Lacag Degdeg ah: 30 Waxyaabood oo La Iibiyo Si Lacag Loogu Sameeyo
#9 Hogaamiyaha tababarka shirkada xilliyeed
Shirkad kasta oo halkaas ka jirta ayaa caadiyan ku casuuma macallimiin waaweyn inay yimaadaan oo ay tababaraan xooggooda. Markaa, macallin ahaan, aqoontaada baaxadda leh ayaa ku faraxsan shirkad kasta waxayna had iyo jeer u dhaqaaqi doonaan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen sameynta aqoontaada hodanka ah iyagoo kugu martiqaadaya tababar waqtiyo kala duwan.
Tababar kasta oo aad tagto, waxaa jira xirmo maaliyadeed. Waxay hadda adiga ku saaran tahay inaad heshiis la gasho shirkadda inta aad rabto inaad kasbato.
#8 Buuxi Baadhitaano Online ah
Adigoo buuxinaya sahannada internetka marka aad ku habboon tahay, waxaad lacag ku heli kartaa fikraddaada mowduucyo kala duwan.
Si aad u bilowdo waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad fiiriso goobaha sahaminta dhabta ah sida Swagbucks, dollarka sanduuqa, junkie sahanka, fikirka junkie, iwm.
Celceliska mushaharka sahanka internetka waa $ 0.50 ilaa $ 5.00 sahan kasta. In kasta oo mushaharku uusan badnayn, waxaad dooran kartaa inaad u rogto kaararka hadiyadda ee Amazon, oo u fiican sida lacag caddaan ah!
#7 Noqo qoraa madaxbanaan
Baahida loo qabo qorayaasha gudbin kara xaqiiqooyinka iyo macnaha erayada qoran iyo hadalka ayaa kor u kacay. Sida qoraa madaxbanaan, adiga lacag ka samee qorista.
Qoraa madax -bannaan waa qof sida caadiga ah wax u qora wax ka badan hal macmiil waxaana la siiyaa halkii qoritaan ama qayb kasta oo meeleyn ah.
Waxa ka dhigaya shaqo labaad oo la yaab leh macallimiinta ayaa ah awoodda aad ku kasban karto wax kasta oo aad rabto inaad kasbato maadaama aysan jirin qiimayaal go'an oo go'an.
Adigoo ah qoraa madax -bannaan, waxaad dooran kartaa inaad qorto qoraallada baloogyada, joornaalada, waxyaabaha ku jira goobta, eBooks, iwm.
Si aad u bilowdo, dooro niche qoraal ah oo ku abuur faylalka mid kasta oo ka mid ah aaladaha warbaahinta bulshada ama websaydhada sida shaqada iyo fiverr.
Tani waa hal shaqo oo waqti-dhiman ah oo aad u wanaagsan macallimiinta.
#6 Blog -ga
Macallimiinta, balooggu wuxuu u noqon doonaa shaqo labaad oo la jeclaado marka loo eego jihayntooda tacliimeed iyo habka xeeladeed ee macluumaadka iyo barashada.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka blog -ka ayaa ah inaad dooran karto niche ku saleysan saldhigga aqoontaada ama qaddarintaada. Taas micnaheedu waa, waxaad ku bilaabi kartaa blog koorsada aad ku takhasustay, ama waxaad bilaabi kartaa blog ku saabsan talooyin ku saabsan sida loo noqdo macallin wanaagsan ama arday isku mid ah.
Waxaad ku bilaabi kartaa iibsashada magac domain, xulashada martigaliye websaydh jaban, iyo adeegsiga shaashadda WordPress si aad u abuurto balooggaaga.
#5 Macalinka koorsada onlaynka ah
Macalimiinta jecel inay aqoonta ku sii daayaan internetka iyagoo adeegsanaya MOOCs, waxay lacag badan ka helaan diiwaangelinta. Mid ka mid ah wax wanaagsan oo ku saabsan tan ayaa ah, marka aad si guul leh u abuurto koorso onlayn ah, waxaa laga yaabaa inaad cusboonaysiiso oo aad rogto koorsada si aad ugu raaxaysato dakhliga haraaga sannadka oo dhan.
Sidaa darteed, haddii aad ku raaxaysato isku -darka bandhigyada iyo teknolojiyadda, waxaad ku abuuri kartaa koorsadaada khadka tooska ah sida Udemy, Coursera, edX, iwm.
#4 Wakiilka guryaha
Macalimiinta sumcadda leh waxay ku habboonaan doonaan wakiilada guryaha. Wakiilka hantida ma guurtada ah waa qof matala kuwa iibiya ama iibsada hantida maguurtada ah or hantida dhabta ah.
Ku shaqaynta sida wakiilka hantida maguurtada ah waxay ku siinaysaa fursado halkaad kala xiriiri karto macaamiisha kala duwan.
Si aad u bilowdo sida wakiilka guryaha, waxaad u baahan tahay inaad baarto mareegaha xafiiska sharciyeynta hantida ma guurtada ee gobolkaaga si aad u ogaato shuruudaha ruqsadda.
Shaqadani waxay u gudubtaa sida wanaagsan ee macalimiinta.
Ka faa'iidayso talooyinkeena sare sida loo gato guri bilaa lacag bixin ah.
#3 Iibi qorshooyinka casharka
Si loo badbaadiyo barayaasha culeyska abuurista qorshayaasha casharrada, macallimiinta awooda inay abuuraan qorshayaasha casharka ayaa sidaas samayn kara oo lacag ka samayn kara.
Qorshayaasha casharka waxaa lagu dhisay heerar gaar ah, marka waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad abuurto qorshe cashar oo buuxiya halbeeg gaar ah. Waxaad ka iibin kartaa qorshayaasha casharrada Macallimiinta Bixi Macallimiinta
#2 Qoritaanka Ebook
Aqoonta baaxadda leh, waxaad leedahay macallin ahaan, qoritaanka eBook -ga ayaa laga yaabaa inay noqoto hab ka wanaagsan oo lagula wadaago maalkaaga aqooneed isla markaana aad xoogaa xoogaa lacag ah u samaysato.
Sida laga soo xigtay Huffingpost, qiyaastii rubuc dhammaan iibka doolarka ayaa ah qaab eBooks ah.
Waxaa jira aagag badan oo aad ku daabacan karto eBook -kaaga lacag la’aan sida; Daabacaadda Tooska ah ee Amazon Kindle (KDP), BookRix, Smashwords, iyo qaar kaloo badan.
LA XIDHIIDH BADAN: 25 Siyaabood oo lacag laguugu siiyo Qorista Faallooyinka 2021 | Lacag Degdeg ah
#1 Macallinka TESL/TEFL
Tani sidoo kale waa shaqo labaad oo mushahar sare leh oo loogu talagalay macallimiinta wax u dhigi kara Ingiriisiga sidii luqad labaad ama luqad shisheeye.
Shaqadani qasab kuguma aha inaad timaado goob gaar ah: waxaa laga samayn karaa meel fog laga bilaabo raaxada gurigaaga. Waxaa jira umeerin hal-qof ah iyo sidoo kale kalfadhiyo umeerin kooxeed, dhammaantoodna waxaa lagu sameeyaa kombiyuutar iyo kaamirada webka.
Goobaha waxbaridda ee internetka caanka ah sida VIPKID, Aloo7, Iyo Qkids aqbalaan dadka ku hadla Ingiriisiga hooyo ee haysta dhalashada Mareykanka ama Kanada. Intaa waxaa dheer, in yar oo loo shaqeeyayaasha TESL ah ayaa dalbanaya shahaado.
Ilaha dakhli ee lagu daray haddii kale u ogow rabitaanka dhinaca macallimiinta waxba ma yeeli doono: waxayse kordhin doontaa dakhligaaga. Si fiican u samee si aad ugu fiicnaato liisaska shaqooyinka waqti-dhiman ee liiska ku qoran ee macallimiinta.
Marka lagu daro inaad haysato ilo dakhli oo lagu daray, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato oo aad qaadatid xeerka miisaaniyadda si ay kaaga caawiso inaad u maamusho oo aad u maalgeliso lacagta caddaanka ah. Si taas loo gaaro, arag annaga barnaamijyada miisaaniyadda ugu sarreeya si aad u bilowdo.
10 Aabbaha ugu Taajirsan Aabbaha ugu liita Casharrada Aabbaha ee Ganacsigaaga 2021
Shuruudaha VIPKid: Yaa u qalma inuu codsado VIPKid sanadka 2021?
10ka Qalab ee ugu Fiican ee Jimicsiga Gurigaaga 2022